Nashville TN ခေါင်မိုးလုပ်ငန်းကန်ထရိုက်တာ
အပေါ် Posted စက်တင်ဘာလ 23, 2016အောက်တိုဘာလ 5, 2016 အားဖြင့် Cacilia chase	တစ်ဦးသက်ကြီးရွယ်အိုအိမ်ခေါင်မိုးများအတွက်မှန်ကန်သောအစားထိုးရွေးချယ်ခြင်း – ဒါမှမဟုတ်အသစ်အဆောက်အဦများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖော်ထုတ် – အဘယ်သူမျှမလွယ်ကူသောအလုပ်ဖြစ်ပါသည်. တဦးတည်းအဆောက်အဦများအတွက်စုံလင်သောအမိုးမိုးဖြေရှင်းချက့်လမ်းဆင်းအခြားများအတွက်အဆိုးဆုံး option ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ. အဘယ်သူမျှမနှစ်ဦးကိုအဆောက်အဦးများတိကျစွာရောနှောကြောင့်ဒါကင်, သူတို့အနီးကပ်အချင်းချင်းတူလျှင်ပင်. ဒါကြောင့်သင်မည်သို့အသစ်တစ်ခုကိုအိမ်ခေါင်မိုးကိုရွေးချယ်ကြဘူး, ဈေး၌ရှိသမျှသောရွေးချယ်မှုများပေးထား? သငျသညျမေးခွန်းတွေဆက်တိုက်မေးခြင်းအားဖြင့်စတင်နိုင်ပါသည်, သငျသညျအမိုးကိုရှေးခယျြမီက, အမိုးမိုးကန်ထရိုက်တာသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူ.
Warren မိုးမိုး,မိုးမိုး Ann Arbore,Ann Arbore မိုးမိုး,Detroit ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ,မီချီဂန်အတွက်အမိုးမိုးကုမ္ပဏီတွေက,roseville မိုးမိုး,Detroit roofers,kalamazoo မိုးမိုး,လန်စင်းမိုးမိုး,မက်ထရိုဒက်ထရွိုက်အမိုးမိုး,အိမ်ခေါင်မိုးပြုပြင် Ann Arbore,မိုးမိုး Detroit,မိုးမိုး Michigan,Detroit မိုးမိုး,Michigan မိုးမိုး,မိုးမိုးကုမ္ပဏီတွေ Michigan,မီချီဂန်အတွက်အမိုးမိုးအလုပ်အကိုင်,Auburn မိုးမိုးကန်ထရိုက်တာ,မီးကျောက်အမိုးမိုး,Michigan မိုးမိုး code ကို,အိမ်ခေါင်မိုးပြုပြင် Detroit,မီချီဂန်အတွက်အမိုးမိုးကန်ထရိုက်တာများ,မီချီဂန်အတွက်အကောင်းဆုံးအမိုးမိုးကုမ္ပဏီ,မီချီဂန်ထဲမှာစီးပွားဖြစ်မိုးမိုးကုမ္ပဏီတွေက,စီးပွားဖြစ်မိုးမိုး Michigan,Michigan မိုးမိုးကုမ္ပဏီတွေက,Michigan မိုးမိုးကန်ထရိုက်တာများ,မီချီဂန်ထဲမှာ roofers,မိုးမိုးကန်ထရိုက်တာ Michigan,မီချီဂန်အတွက်အမိုးမိုး,ခရစ်ယာန်ဘာသာ Detroit မိုးမိုး,dearborn မိုးမိုး,Detroit အိမ်မှာတိုးတက်မှု,Detroit အိမ်ခေါင်မိုးပြုပြင်,Detroit မိုးမိုးကုမ္ပဏီတွေက,Detroit မိုးမိုးကုမ္ပဏီ,Michigan roofers,ဆိပ်ကမ်း Huron မိုးမိုး,မီချီဂန်အတွက်အိမ်ခေါင်မိုးကုမ္ပဏီတွေက,မိုးမိုးကုမ္ပဏီ Michigan,မိုးမိုးကန်ထရိုက်တာ Detroit
ဖုန်းခေါ်ဖို့လုပ်နေကြတယ်ခင်မှာ ဒက်ထရွိုက်ခေါင်မိုးဝန်ဆောင်မှု, ကအဆောက်အဦမှပြောပြတယ်အဖြစ်ကိုင်တွယ်ရန်ပထမဦးဆုံးကို item ကုမ္ပဏီရဲ့မစ်ရှင်ကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ်.
သငျသညျတတ်နိုင်သမျှအဆောက်အဦးနှင့်၎င်း၏အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်. အဖြစ်တာကိုသိရန်လိုအပ်.
လာမည့်၎င်း၏အိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်ဤအဆောက်အဦးစောင့်ရှောက်ရန်အမိုးမိုးကုမ္ပဏီအစီအစဉ်မ 10 သို့ 20 အနှစ်? ထိုသို့တိုးချဲ့ဖို့ဆိုအစီအစဉ်များကိုမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်၌ရှိပါသလား, သို့မဟုတ်ယင်း၏အသုံးပြုမှုကိုပြောင်းလဲဖို့? သူ့ရဲ့လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်ထေိုဘာတွေလဲ, insulator တွင်လည်းလိုအပ်ချက်များ, ဗေဒဦးစားပေးများနှင့်ခေါင်မိုးပေါ်ရှိပစ္စည်းကိရိယာများအဘို့ကိုပင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအချိန်ဇယား?
ဥပမာ, ပိုပြီးကုမ္ပဏီတွေလုပ်ငန်းလည်ပတ်မျက်နှာသို့ပြောင်းရွေ့အဖြစ် 24 နေ့စဉ်နာရီ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖောက်သည်များကျေနပ်အောင်မှခုနစ်ရက်ပတ်လုံးတစ်ပါတ်, ဒေတာစင်တာတစ်ခုခေါင်မိုးပေါ်ရှိယိုစိမ့်ပေါက်ဘယ်တော့မှရမယ်. ကွန်ပျူတာစနစ်များကိုအပေါ်ရေယေဘုယျအားဖြင့်ဘေးအန္တရာယ်ကရှင်းလင်းပြောပြ.
စိုးရိမ်ပူပန်၏အထူး set ကိုအအေးကြီးစိုးရာသီဥတုအဘို့ပေါ်ထွန်းတော်. ခေါင်မိုးလေအေးပေးစက်ငွေစုဖို့အထောက်အကူများနှင့်အခြားသော့ချက်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်ပါသလား? ဒါကြောင့်တစ်ဦးစုစုပေါင်းစွမ်းအင်ကိုအစီအစဉ်၏တစိတ်တပိုင်း? မြို့ပြအပူကျွန်းများအကြောင်းကြီးထွားလာစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိပါသည်. ရောင်ပြန်ဟပ်, အဖြူခေါင်မိုးအနည်းငယ်အကြောင်းပြချက်များအတွက်အဲဒီဒေသတွေအတွက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်လာကြပါပြီ. သူတို့ကအဆောက်အဦးအေးကိုစောင့်ရှောက်, လေအေးပေးစက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်လည်းပတျဝနျးကငျြပတ်ဝန်းကျင်၏အပူ-တင် minimize.
အခါအိမ်ခေါင်မိုးကိုအစားထိုးမှကြွလာ, သငျသညျခေါင်မိုးဧရိယာကိုယ်တိုင်က၏ Attribute တွေစာရင်းပြုစုဖို့လိုအပ်. ဒါဟာအသေးစိတျဖို့အိမ်ခေါင်မိုးရဲ့အရွယ်အစားအကောင်းဆုံးင်, ပုံသဏ္ဌာန်, ဆငျခလြော, ကုန်းပတ်ဆောက်လုပ်ရေး, အစွန်းအသေးစိတ်, protrusions, ခေါင်မိုးပေါ်ရှိဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်လက်ရှိအမိုးမိုးသည့်စနစ်. ဒီအခြေခံသတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူ, မူရင်းခေါင်မိုးမရှိတော့လုံလောက်သောသည်အဘယ်ကြောင့်သင်တို့အထဲကရှာတွေ့ဖို့လိုအပ်.
အများစုမှာ TPO မြှေးပါး polyester နှင့်အတူဖြည့်နေကြ, ဖိုက်ဘာမှန်ခြင်းသို့မဟုတ်နှစ်ခုပေါင်းစပ်, ဒါပေမဲ့ unreinforced TPO မြှေးပါးရရှိနိုင်ပါသည်.
ပြုပြင်ထားသောကတ္တရာစေးမြှေးပါး built-တက်မိုးမိုးမှာအသုံးပြုတဲ့အစဉ်အလာတပ်ဆင်ခြင်းနည်းစနစ်အချို့ကိုနှင့်အတူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်-အမြှေးပါးအမိုးမိုး၏ရေးဆွဲရေးနှင့်အကြံအဖန်တွေချည်းအားသာချက်များကိုထည့်သွင်း. ပြုပြင်ထားသောကတ္တရာစေးစာရွက်များစက်ရုံ-လုပ်ကြံမှုများနေကြတယ်, တိုးမြှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်များအတွက်ရော်ဘာသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်ပေါ်လီမာနှင့်အတူပြုပြင်မွမ်းမံထားတဲ့ကတ္တရာ၏ရေးစပ်, နှင့်ဆက်ပြောသည်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိနှင့်တည်ငြိမ်မှုများအတွက်အင်အားဖြည့်နဲ့ပေါင်းစပ်.
အများစုကအချက်များစွာတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အဆောက်အဦများအတွက်အကောင်းဆုံးစနစ်ကဆုံးဖြတ်. အများဆုံးအဆောက်အဦးများအတွက်, စက်ရုံရဲ့မစ်ရှင်ကြေညာချက်ဆန့်ကျင်အလေးချိန်ခံရဖို့လိုအပျကွောငျး options နဲ့အားသာချက်တစ်ခုအရေအတွက်ရှိပါတယ်. အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်သာကုန်ကျ၏အခြေခံပေါ်မှာလုပ်မဖြစ်သင့်. အမြှေးပါးအဘို့အခြားအရေးကြီးသောထည့်သွင်းစဉ်းစားအမြင့်တည်ဆောက်နေကြတယ်, လေတိုက်ထိတွေ့ခြင်း, မျှော်လင့်ခေါင်မိုးအသွားအလာနှင့်ဗေဒ.
5. အလုပ် site ကိုမှကယ်နှုတ်တော်မူ၏အားလုံးအမိုးမိုးပစ္စည်းကိုအ ul တံဆိပ်ကိုခံရပါဘူး?
ထို့အပြင်, သငျသညျကိုဝယ်သို့မဟုတ်သတ်မှတ်ခေါင်မိုးပရိသကြောင်းသေချာဖြစ်, သောလျှပ်ကာတို့ပါဝင်သည်, ul-ခွဲခြားနှင့် -labeled ဖြစ်ပါတယ်.
သငျသညျရတဲ့နေသောကုန်ပစ္စည်းစမျးသပျခဲ့ကွောငျးအမှန်တကယ်ထုတ်ကုန်ကြောင်းသေချာပါစေ. သငျသညျဆင်တူကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုမလိုချင်ပေမယ့်တန်းတူပါဘူး. အလုပ်ဆိုက်မှာတံဆိပ်ကိုရှာပါနှင့်စနစ်၏အားလုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုအတူတကွစမျးသပျခဲ့ကြသေချာအောင်. သင်ကအမြှေးပါးသင်သည်သင်၏အဆောက်အဦးအပေါ်ကိုအသုံးပြုပြီးသောလျှပ်ကာနှင့်အတူစမျးသပျခငျြ.
လေတိုက်ဆောင်ရွက်ဖို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်စျေးကြီးရှိနိုင်ပါသည်. တစ်ဦးစက်မှုလုပ်ငန်းစံအဖြစ်လက်ခံ, မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာများနျ Standard ၏ American Society 7-95, “အဆောက်အဦနှင့်အခြား structures များအဘို့အနိမ့်ဆုံးဒီဇိုင်းပြရန်,” ထိုအဆောက်အဦး၏လေတိုက်ဇုန်ဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပွုနိုငျ. လေတိုက်ဆောင်ရွက်ဖို့စမ်းသပ်ခြင်း, ထိုကဲ့သို့သောစက်ရုံအပြန်အလှန်သို့မဟုတ် Underwriters Laboratories မှာဖျော်ဖြေကအဖြစ်, ရွေးချယ်ထားတဲ့အိမ်ခေါင်မိုးစနစ်ကဒေသခံလေတိုက်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေတွေ့ဆုံသို့မဟုတ်ထက်ကျော်လွန်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပွုနိုငျ.
7. ဘယ်လောက်အပြီးစီးခဲ့သည့်စနစ်ခေါင်မိုးဖွဲ့စည်းပုံမှာအသေဝန်အလေးချိန်မှ add ပါဘူး?
မည်သည့် reroofing option ကိုရှေးခယျြရာတှငျ, စက်ရုံအုပ်ချုပ်ရေးတာသေချာပါလက်ျာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်-အမြှေးပါး option ကိုရွေးချယ်ပါစေခေါင်မိုးကုန်းပတ်၏ဝန်-bearing စွမ်းရည်မြှင့်သတိထားမိဖြစ်သင့်. အသစ်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်, ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာသံမဏိအတွက်ငွေစုမကြာခဏပေါ့ပါးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်-အမြှေးပါးစနစ်တွေထဲကတစ်ခုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်အောင်မြင်နိုင်ပါသည်.
တစ်ဦးက ballasted thermoplastic သို့မဟုတ် EPDM အိမ်ခေါင်မိုးများပိုလျှံအတွက်လိုအပ်နိုင်ပါသည် 1,000 နှုန်း POUNDS 100 စတုရန်းပေ, တစ်ဦးနည်းစနစ်ပူးတွဲသို့မဟုတ်အပြည့်အဝလိုက်နာ thermoset သို့မဟုတ် thermoplastic အမြှေးပါးချိန်စဉ် 33 နှုန်း POUNDS 100 စတုရန်းပေ.
မိုးမိုးကန်ထရိုက်တာကြီးမြတ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူရှေးခယျြခံရဖို့လိုအပ်. အတိတ်ကာလအတွင်းအသစ်အမိုးမိုးပစ္စည်းများနှင့်လျှောက်လွှာနည်းစနစ်များ၏နိဒါန်း 10 နှစ်ပေါင်းများပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်. တစ်ဦးကပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိုးမိုးကန်ထရိုက်တာမိုးမိုးစနစ်တွေအမျိုးမျိုးနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖြစ်သင့်, သင်သည်သင်၏စက်ရုံအတွက်အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလုပ်ကိုကူညီ, သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်အပေါ်အခြေခံပြီး.
ကွဲပြားခြားနားတဲ့အမိုးမိုးစနစ်များ၏ installation သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသည်. ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအမိုးမိုးစနစ်များ၏ installation အတွက်အရေးအပါဆုံးဒြပ်စင်များမှာ. သင်ရွေးချယ်မိုးမိုးကန်ထရိုက်တာကို install လုပ်ခံရစနစ်အပေါ်အသေးစိတ်နှင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလေ့ကျင့်ရေးခဲ့သေချာအောင်လုပ်ပါ.
အမျိုးသားခေါင်မိုးကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှတဲ့ professional မိုးမိုးရွေးချယ်ရေးလမ်းညွှန်ကမ်းလှမ်း. ဖြည့်စွက်ကာ, အများအပြားထုတ်လုပ်သူ roofers ခွင့်ပြုချက်မီကဖြည့်စွက်ရမည်ကိုတိကျတဲ့အရည်အချင်းများနှင့်အတူကန်ထရိုက်တာအစီအစဉ်များကိုအတည်ပြုကြပြီ.
မိုးမိုးအာမခံနှစ်ယောက်အခြေခံပညာအမျိုးအစားရှိပါတယ်. အဆိုပါကန်ထရိုက်တာရဲ့အာမခံပုံမှန်အားဖြင့်လက်ရာဖုံးလွှမ်း. ထုတ်လုပ်သူရဲ့အာမခံအနည်းဆုံးပစ္စည်းများဖုံးလွှမ်း, သော်လည်းများစွာသောအဖုံးအပိုဆောင်းပစ္စည်း. ထုတ်လုပ်သူရဲ့အာမခံကျယ်ပြန့်သည်ရင်တောင်, ခေါင်မိုးမလျြော install လုပ်ပြီးပါကလုံးဝသငျသညျကာကွယ်မည်မဟုတ်.
ဂရုတစိုက်ဖတ်နှင့်နားလည်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ဆိုအမိုးမိုးအာမခံနှင့်ကပယ်မယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းချက်အဘို့စောင့်ကြည့်. ဥပမာ, အားလုံး ponded ရေကိုရှောင်ကြဉ်ရန်မဖြစ်နိုင်လောက်ရဲ့. Ponded ရေထောက်ခံမှုစစ်ကြောင်းများအကြား၌အိမ်ခေါင်မိုးကုန်းပတ်တစ်ခုလုံးဝမရှိတာအထင်အရှားအိမ်ခေါင်မိုးယိုစီးမှုသို့မဟုတ် deflecton နဲကဖြစ်စေနိုင်ပါသည်. သငျ့လျြောသောအိမ်ခေါင်မိုးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအအာမခံတရားဝင်ရှိနေဆဲကြောင်းအာမခံကူညီပေးနိုင်ပါသည်. ထိုအာမခံချက် voids ကြောင်းအာမခံဘာသာစကား၏သတိထားပါ.
ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဉ်ခေါင်မိုးစနစ်၏အသေးစိတ်အမြင်အာရုံစာမေးပွဲပါဝင်ပါသည်, လျှပ်တစ်ပြက်, မည်သည့်အလားအလာကိုဒုက္ခဒေသများတွင်ဖော်ထုတ်ရန် insulator တွင်လည်းနှင့်ဆက်စပ်အစိတ်အပိုင်းများကို.
10. ခေါင်မိုးကို install လုပ်ပြီးနောက်, ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပညာရေးအစီအစဉ်များပြီးနောက်အဆောက်အဦစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များအတွက်ရရှိနိုင်ဘာတွေလုပ်နေလဲ?
တိကျတဲ့သင်ရိုးအဆောက်အဦးပိုင်ရှင်များနှင့်အဆောက်အဦမန်နေဂျာအမျိုးမျိုးသောအမိုးမိုးစနစ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူကိုကူညီရရှိနိုင်ပါ, ပစ္စည်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများ; လျှပ်ကာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်; အိမ်ခေါင်မိုးဒီဇိုင်း၏ဒြပ်စင်; ကန်ထရိုက်တာရွေးချယ်ရေး; အာမခံနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုထည့်သွင်းစဉ်းစား.
အပိုဒ်ရင်းမြစ်: ကို http://EzineArticles.com/expert/Julian_Arhire/94516
အပိုဒ်ရင်းမြစ်: ကို http://EzineArticles.com/6336340
18312 Woodingham Dr, ဒက်ထရွိုက်, MI 48221
Call (313) 332-4858 Detroit Roofing Service for your free estimate. We provide roofing all roofing services for the Detroit, Michigan Metro Area from new roof installation, metal roofs, roofing repair, tile, shingle or flat roof, gutter installs, etc... ဒီအမျှဝေပါ:Twitter ပေါ်တွင်မျှဝေဖို့ကိုနှိပ်ပါ (အသစ်သောပြတင်းပေါက်၌ဖွင့်လှစ်)Click to share on Facebook (အသစ်သောပြတင်းပေါက်၌ဖွင့်လှစ်)Google+ တွင်မျှဝေဖို့ကိုနှိပ်ပါ (အသစ်သောပြတင်းပေါက်၌ဖွင့်လှစ်)
Posted in UncategorizedTagged Ann Arbore မိုးမိုး, Auburn မိုးမိုးကန်ထရိုက်တာ, မီချီဂန်အတွက်အကောင်းဆုံးအမိုးမိုးကုမ္ပဏီ, ခရစ်ယာန်ဘာသာ Detroit မိုးမိုး, မီချီဂန်ထဲမှာစီးပွားဖြစ်မိုးမိုးကုမ္ပဏီတွေက, စီးပွားဖြစ်မိုးမိုး Michigan, dearborn မိုးမိုး, Detroit အိမ်မှာတိုးတက်မှု, Detroit ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ, Detroit အိမ်ခေါင်မိုးပြုပြင်, Detroit roofers, Detroit မိုးမိုး, Detroit မိုးမိုးကုမ္ပဏီတွေက, Detroit မိုးမိုးကုမ္ပဏီ, မီးကျောက်အမိုးမိုး, kalamazoo မိုးမိုး, လန်စင်းမိုးမိုး, မက်ထရိုဒက်ထရွိုက်အမိုးမိုး, Michigan roofers, Michigan မိုးမိုး, Michigan မိုးမိုး code ကို, Michigan မိုးမိုးကုမ္ပဏီတွေက, Michigan မိုးမိုးကန်ထရိုက်တာများ, ဆိပ်ကမ်း Huron မိုးမိုး, မီချီဂန်အတွက်အိမ်ခေါင်မိုးကုမ္ပဏီတွေက, အိမ်ခေါင်မိုးပြုပြင် Ann Arbore, အိမ်ခေါင်မိုးပြုပြင် Detroit, မီချီဂန်ထဲမှာ roofers, မိုးမိုး Ann Arbore, မီချီဂန်အတွက်အမိုးမိုးကုမ္ပဏီတွေက, မိုးမိုးကုမ္ပဏီတွေ Michigan, မိုးမိုးကုမ္ပဏီ Michigan, မိုးမိုးကန်ထရိုက်တာ Detroit, မီချီဂန်အတွက်အမိုးမိုးကန်ထရိုက်တာများ, မိုးမိုးကန်ထရိုက်တာ Michigan, မိုးမိုး Detroit, မီချီဂန်အတွက်အမိုးမိုး, မီချီဂန်အတွက်အမိုးမိုးအလုပ်အကိုင်, မိုးမိုး Michigan, roseville မိုးမိုး, Warren မိုးမိုး	Post ကိုအညွှန်း
← ခေါင်မိုးပြုပြင်ရေးကိုရှာဖွေဖို့ကိုဘယ်လို? ဒက်ထရွိုက်, MIRoofing Contractors Detroit Michigan→	Add your own widgets here	theme: Dustland Express က အားဖြင့် လွန်